Awoodda luminta qofka yaa leh? – Kaasho Maanka
Awoodda luminta qofka ma Alle ayaa leh mise abuur kale oo shar badan oo Ibliis la yiraahdo mise ruuxa laf ahaantiisa? Sida ku cad aayado badan oo ku jira Buugga Quraanka iyo Buugga Baybalka, lagana yaabo in laga helo buugaag diineedyada kale, qofka iska leh awoodda baadiyeynta ruuxa waa Alle oo aanay cidi tarrixin.
Sida laga dhadhansan karo aayadahaas oo aan hadda soo guurin doonnana Alle ayaa malaha qofka iska shuufa oo dabadeedna si uu godadka cadaabta ugu gubo ugu marmarsiyooda in uu isaga caasiyey ama caabudi waayey cibaadadii uu xaqqa u lahaa. Ka soo bilow isha loo aaneeyo sharka oo dhan waa qofnimada la yiraahdo Ibliise illaa iyo ruux walba oo ifkan saaran baadiyeyntooda Alle ayaa tuurta u ritay. Ibliis isaga oo Alle la garnaqsanaya ka dib markii uu diiday in uu abuurka Aadan u foorarsado waa kan dooddiisa ku xoojinaya isaga oo Alle ka marag dhiganaya..
” قال رب بما أغويتنى لازيننهم فى ألارض ولأغوينهم أجمعين”
“Rabbiyow sababta aad ii baadiyeysay (daraaddeed) baan dhulka u qurxin doonaa oo waan baadiyeyn doonaa dhammaantood.” Al-Hijr-39
“Rabbiyow sababta aad ii baadiyeysay (daraaddeed) baan u fadhiisan doonaa jidkaaga toosan” Al-A’raaf-16
Ibliis waxa uu Alle ku dhaliilay in uu isagu lumiyey, sida ka muuqata Quraanka iyo Baybalkana Alle dooddaas Ibliis waxba kuma aanu darsan oo wuu iska balfiyey(dhaga mariyay). Ibliis waxa uu diiday in uu Aadan u foorarsado, haddaba amarka isaga ma la faray? Jawaabtu waa may!
Al-Baqrah -34 “….إلا إبليس كان من الجن، ففسق عن أمر ربه“
Al-Kahf -50 “وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لأدم، فسجدوا الا إبليس أبى..”
“Oo markii aanu ku niri malaa’igta u foorarsada Aadan, way foorarsadeen Ibliis oo diiday mooyaane”.
“..Ibliis (Oo diiday foorarsiga) wuxuu ka mid ahaa jinka, markaas ayuu ka fallaagoobay amarki Rabbigii”.
Waxaa muuqata in uu Alle foorarsiga faray Malaa’igta, Ibliisna aanu malag ahayn ee uu ahaa Jin. Markaa amarku sidee buu Ibliis u saamaynayaa? Alle ma wuxuu raadinayey meel uu Ibliis ugu soo dhuunto si uu mar-marsiiyo uga dhigto gubitaankiisa isaga iyo kuwa raaci doona ee ku jira dhabarka Aadan. Tusaale, haddii aan ku iraahdo idinka oo koox Soomaali ah, waxaa soo galay madaxweynihii Soomaaliya, sidaa daraaddeed Soomaalida goobta joogtaa waa inay fadhiga uga kacaan madaxweynaha, dabadeedna aan aniga oo aaan Soomaali ahayn kici waayo miyaad i canaanan? Sababtoo ah amarku wuxuu khuseeyey Soomaalida keliya.
Haddii aad na oran lahayd dhammaantiin madaxweynaha maamuus ahaan ugu kaca anna ma fariisan lahayn ee waan kici lahaa. Arrinka Ibliis iyo Alle dhex marayna waa sidaas oo Alle wuxuu baxshay amar malaa’iigta ku kooban oo aan saameyneyn jinkii uu Ibliis ka midka ahaa.
Mar kale, Alle wuxuu yiri;
Al-Israa -16 “وإذا أردنا أن نهلك قرية امرنا مترفيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول، فدمرناها تدميرا“
“Oo marka aannu rabno in aannu magaalo halaagno waxaannu madax uga dhignaa kuwooda kelitaliska ah, markaasay fasahaadiyeen, markaas ayuu hadalkii (Halaagga ahaa) ku waajib noqdaa, markaasaannu burburinnaa, burburin daran” Al-Israa -16
Waxaa halkaa inooga cad in Alle doonay in uu halaago magaaladaas ka hor wax walba, ka hor intii aanu taladeeda gacanta u gelin kelitaliska. Markaa Alle ayaa sii qorsheeyey in uu halaago meesha, meel Allihii lahaa uu burbur la jeclaadayna ma jirto cid ka badbaadin karaysa. Su’aasha mudan is waydiintu waxaa weeye “Alle ma qof mar walba xumaan ka fikira oo burbur iyo halaag iyo cadaab maanka ku hayaa?” Saw kan leh maaha:-
Al-Israa -58 “وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا“
“Oo ma jirto magaalo, haddii ay jirtana waannu halaagaynaa maalinta dambe (Qiyaamada) ka hor, ama waannu cadaabaynaa cadaab daran, arrinkaasi waa mid kitaabka ku sugan”.
Waa kan Alle isaga oo si muuqata oo xishood la’aan ah u sheegay in uu halaagi doono goob walba oo labo ruuxi joogaan, sida kuwii hore ee Alle halaagay waxba uguma aanu marmarsiyoon ee wuu ku awood sheegtay keliya! Markaa hadii awoodda luminta, halaagida iyo cadaabiddaba ay Alle gaar u tahay, maxaannu annagu dadka diinta ugu dirqinnaa ama aannu nafaheenna itaalka daran ugu loognaa Allahaas isagu qorshayaashiisa waa hore degay. Ma mudannahay in aanu dhib ka mudanno hardanka Alle iyo Ibliis u dhexeeya oo aannu Alle u collowno Ibliis daraaddii.
Alle saw caadil maaha? Haa, xaashalilaahiye. Haddaba, haddii Alle cadaaladda wax ka yaqaanno muxuu hardan isaga iyo ninkaa qooqay ee Ibliis ah ugu dhex bi’inayaa uunka kale. Oo waa kan lumiddooda sabab uga dhigay isaga si uu u fidneeyo, waa kan yiri waxaan cadaabaha ka buuxin doona adiga Ibliis ah iyo intii ku raacda. Hadda annaga Ilma Aadan ah ma aannu jirin markaa ay Alle iyo inankaas kibrayi doodayeen.
Mar kale innaga oo xagasha kale ka istaagayna, bal aan Alle dhinaca saarno oo Ibliis ka soo horjeedsanno. Ibliis waa abuur in badan Alle caabudayey, oo waxaa la sheegaa dhulka in aanay ku oollin goob illaa Ibliis baa Alle ugu sujuuday ka hor abuurkii Aadan, cibaado badnaantaas ayuuna Ibliis oo Jin ah ku mutay in uu gaaro xadrada samaawiga ee ay malaa’igtu gabranaayeen. Ninkaas taqiga ahaa sidee bay uga suurtowday in uu ku gacansayro Allihii uu intaas caabudayey? Alle qudhiisu addoon intaas caabudayey muxuu u lumiyey? Haddii uu lumin doonana muxuu markiisii hore u arax-jebinayey oo ugu daalinayey cibaadaad badan oo haddana u kool-koolinayey illaa uu gaarsiiyey xadrada samaawiga ah, ka dib markii uu cagta mariyey Jinkii uu Ibliis ka mid ahaa iyo abuurro kale oo waagaas dhulka ku fasahaaday; waa Jin iyo Xin iyo Bin iyo waxyaalo qoodh daran oo la mid ah? “Eeg, CAALAM AL-SIKHAAM”.
oyooIsku soo xoor, loollanka Alle iyo ka dhexeeye Ibliis muxuu daarran yahay? Mid walba ajandaha uu nolosheenna ka leeyahay muxuu yahay? Saw Alle kama caroon in uu Ibliis caasiyey, haddii uu ka carooday muxuu awooddan intan le’eg gacanta ugu geliyey? Ma si uu annaga Aadanaha ah noo galaafto, Allena cadaabaha noogu gubo? Ibliisku waa kii uu ahaa weliga daacadda ah ka hor abuurkii Aadan ee ka dib muxuu mutay, ma ka tegay cibaadadii iyo hawlihiisii oo wuu riddoobay mise barbar xaaraan buu ahaa labada webi ee sharka iyo khayrkaba u aroora?
Ibliis waxuu helay pinka ama sirta abuurka koonka waxaanu ku dhawaaday darajada illahay ama inuu kawn cusub yagleelo ilaahayna dabaduu utuuray waanu fahmay sirtiisa inuu ibliis doonayo awood geerida ka hor istaagta codadkii caalamkana badh buu xaday waanu fidnoobay ninkaa ibliis??
Igu waallo: Awoodaha dhuumaalaysta
Qaybta: Awood sare, Diimaha, Sheeko Maadeed
Haku fakarin cida aan ahay inaad waqti ku lumiso, waxaan kusiin doonaa, wax waliba . Waqtigaygu waa kaaga. Sida aaadan u garanayn meesha aan joogo iyo maqaamka aan sito, ayaanan u aqoon aniguba. Horta yaan ahay? Maahi muuqaalka uu maankaagu ii ekaysiinayo. Hana isku dayin inaad miisaanka culayskayga aad micbaarato, aan isku kaa suureeyo anigu'e ha iga dagdagin. Waxba ma qabto, saamayn toosanna...
W/Q: Abshir Garaad Cumar 1st August 2018